Shirkadda News-saareyaasha - Shiinaha Company News Factory & Shirkado cusub
Intermodal Aisa 2018 goobjoog furitaanka a grand ee Shanghai Expo on 20-kii April. hadalkay waxay diiradda saari doontaa fursad weyn hoos asalka ah ee "One Belt iyo Road", Ururin teknoolajiyada gudaha iyo caalamka cusub iyo alaabta qaar ka mid ah warshadaha la xiriira, sida ka kooban ...
Weelka Tracker sida loo maareeyo gaariga logistics?
First, xirfadda logistics ayaa wajahaya dhibaato ah? 1, sida loo xaqiijiyo ammaanka oo ka mid ah alaabta, alaabada, sida ay bartamihii u dajinta iska? 2, sida looga hortago wadaha wadida khatarta, xatooyo shidaalka, isticmaalka gaarka ah ee baska, jiid nolosha gaarka ah? 3. Sidee inay haleelaan booska uu ka t ...